Dhacdooyinka Masraxa Masraxa Masraxa & Bandhigga Kaniisadda - Shenzhen Yonwaytech Co., Ltd.
Terminal Gadiidka & Xayeysiinta Gagada Diyaaradaha
Tafaariiq Ganacsi & Hoteel Hoteel
Dhacdooyinka Masraxa Riwaayadaha Masraxa & Muuqaalka Kaniisadda
Xarunta Tacliinta Istuudiyaha Waxbarashada & Taliska Amniga
Dibedda Xayeysiinta Muuqaalka Muuqaalka & Boodhadhka
Isboortiga Arena Sport Perimeter LED Display
Joogtaynta cusboonaysiinta sare ee istuudiyaha TV-ga iyo baahinta tooska ah ee dhaaftay 4000Hz, iyagoo hubinaya sawirro aaminnimo oo bilaash ah;
Shaashadda 'LED kirada' waxaa lagu daraa nidaam qallafsan oo deg deg ah oo leh hab dhaqso ah, kabadhada waxaa lagu soo ururin karaa waqti go'an oo kooban, shaashadda oo dhanna si siman ayaa loogu xiraa si aamin ah;
Naqshadeynta muuqaalka kirada ee khafiifka ah ee 'LED' waxay ka dhigeysaa shaashadda LED-ka muuqaal muuqaal fiican.Sidaa darteed ma aha oo kaliya inay bixiso muuqaal fiiqan oo siman, midabyo muuqaal leh oo dhalaalaya ayaa keenaya muuqaal muuqaal la yaab leh, shaashadda lafteedu waa muuqaal qurux badan oo soo jiidasho leh;
Naqshadeynta shaashadda iftiinka iftiinka iftiinka LED-ga ayaa wax badan ka faa'iideystay rakibidda fudud iyo dhakhsaha badan iyo kala-furfurka, iyadoo lagu keydinayo kharash badan hawlgalka iyo rarka.
Die cast aluminium LED bandhigay waxaa loo dhisay adkeysi waxayna u adkeysan kartaa wareegyada soo noqnoqda ee abaabulka iyo rakibida Yonwaytech.
Caadi ahaan heerka shaashadda LED-ka waxaa lagu qalabeeyaa fiidiyeyaasha fiidiyowga sida X1, LVP609s, LVP615S iwm si loo ogaado shuruudaha gelitaanka calaamadaha badan iyo saameynta muuqaalka.
Ku qalabaysan nidaam xirfadle maqal iyo muuqaal ah, marxaladda LED Wall waxay abuuri kartaa muuqaallo muuqaal ah iyo saameyn midab leh.
Goobta: Bulshada Yutang, Degmada Guangming, Shenzhen, PR China
Mob iibka: +86 138 2358 7729
(WhatsAPP & Wechat waa la heli karaa)